नेपालमा पहिलोपटक भेटिएको कोभिडको ‘डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट’ किन खतरनाक? | समाचार
April 18, 2021 NepstokLeaveaComment on नेपालमा पहिलोपटक भेटिएको कोभिडको ‘डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट’ किन खतरनाक?
नेपालमा पनि पहिलोपटक कोरोना भाइरसको खतरनाक रूप मानिने ‘डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट’ भेटिएको छ। ललितपुरका एक व्यक्तिबाट लिइएको नमुना हङकङस्थित प्रयोगशालामा जाँच गर्दा ‘डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट’ देखिएको हो। जुन ‘भेरिएन्ट’ भारतमा यसअघिदेखि नै व्यापक मात्रामा फैलिरहेको छ। आखिर यसलाई किन खतरनाक मानिन्छ?
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मार्च अन्त्यतिर भारतको नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (एनसीडीसी) ले कोरोनाको एक नयाँ भेरिएन्ट ‘डबल म्युटेन्ट’ भेटिएको जानकारी दिएको थियो। जसलाई वैज्ञानिकले बी.१.६१७ नाम दिएका छन्, जसमा दुई किसिमका म्युटेसन छन्– ई४८४क्यू र एल४५२आर। यो भाइरसको त्यस्तो रूपमा जुन दुईपटक परिवर्तन भइसकेको छ।
भाइरसले आफूलाई लामो समय सक्रिय राख्न आफैं लगातार आफ्नो जेनेटिक संचरना परिवर्तन गरिरहन्छ, ताकि आफूलाई केहीले नष्ट गर्न नसकोस्। यसैकारण कोरोनाको यो भेरिएन्ट निकै खतरनाक मानिन्छ।
नयाँ भेरिएन्ट किन यति खतरनाक?
यो नयाँ म्युटेसनले अन्य दुई म्युटेसनको जेनेटिक कोड (ई४८४क्यू र एल४५२आर) आफूमा समाहित गरेको छ, जुन यसअघि नै विश्वभर फैलिसकेको छ। जहाँ यो दुई म्युटेसन निकै संक्रामक मानिन्छन् त्यसमाथि पहिलोपटक दुवै एकीकृत रूपमा देखापरेका हुन्, जुन झन् धेरै गुणा संक्रामक र खतरनाक रूपमा देखापरेको हो।
साधारण भाषामा भन्नुपर्दा डबल म्युटेसन कोरोनामा दुई फरक फरक स्पाइक प्रोटिन मार्कर छन्। जसको सहायतामा भाइरस मानव शरीरको कोषमा टाँसिन्छ र त्यसपछि अंग अंगमा आक्रमण गर्न थाल्छ। यो भेरिएन्टले स्पाइक प्रोटिनको संरचना बदल्छ, जसबाट भाइरस कोषमा टाँसिएर कैयौं गुणा आफ्नो संख्या वृद्धि गर्छ। यसले संक्रमण भयावह बनाउँछ।
नयाँ भेरिएन्ट इम्युनिटीका लागि पनि खतरा हो?
अहिलेसम्म वैज्ञानिकले डबल म्युटेन्ट भाइरसले कति तीव्र गतिमा वा कति मानिसलाई संक्रमण गरेको छ भन्ने विषयमा ठोस प्रमाण दिन सकेका छैनन्। तर पनि जुन तरिकाले भारतभर कोरोनाको दोस्रो लहर तेज गतिमा फैलिरहेको छ, त्यस आधारमा भने विशेषज्ञले यसो हुनुमा त्यही भेरिएन्टको भूमिका भएको अनुमान गरेका छन्।
विशेषज्ञका अनुसार डबल म्युटेन्ट भाइरस ज्यादै संक्रामक, तेज गतिमा फैलिने र मानिसलाई गम्भीर बिरामी बनाउन सक्ने खालको हो। यसले पूरै स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै असफल बनाउने जोखिम छ, जसको संकेत अहिले देखापर्दैछ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरी नयाँ भेरिएन्टले संक्रमणको दर बढ्न सक्ने तथा यसले मानिसको इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता) मै प्रहार गर्न सक्छ।